Mpitoriteny 6: 1-12
Mpitoriteny 5 Mpitoriteny 6 Mpitoriteny 7
Misy ratsy efa hitako aty ambanin'ny masoandro, ary mitambesatra amin'ny olona izany:
dia olona izay omen'Andriamanitra vola aman-karena sy voninahitra, ka tsy misy tsy ananany na inona na inona iriny, nefa tsy omen'Andriamanitra fahefana hihinana amin'izany izy, fa olon-kafa no homana azy; zava-poana sy ratsy mahory koa izany.
Na dia misy miteraka zaza zato aza sady tratrantitra, ka efa maro ny andro niainany, nefa tsy mba voky soa ny fanahiny, sady tsy mba alevina akory ny fatiny, dia hoy izaho: Ny tsy tonga volana dia tsara kokoa noho izy.
Fa toa zava-poana no nihavian'io, ary mandeha ao amin'ny maizina izy, sady ho voasaron'ny aizina ny anarany,
ary koa, tsy nahita na nahalala ny masoandro akory izy,mahita fitsaharana bebe kokoa noho ilay teo izy.
Eny, na dia tratra arivo taona indroa aa izy, nefa tsy nahita soa, tsy ho any amin'ny fitoerana iray ihany va no alehan'izy rehetra?
Ny fisasarana rehetra ataon'ny olona dia ho an'ny vavany ihany, nefa tsy mety afà-po faniriany.
Fa inona no soa azo'ny hendry noho ny adala? Inona no azon'ny malahelo izay mahay mitondra tena eo imason'ny velona?
Ny fahitan'ny maso dia mahafinaritra noho ny firenirenin'ny faniriana. Zava-poana sy misambo-drivotra foana koa izany.
Izay efa teo dia voalaza anarana hatry ny fony ela, ary fantatra fa ny olona dia tsy mahazo mifandahatra amin'izay mahery noho izy.
Fa maro ny zavatra mahabe ny zava-poana, koa inona no soa azon'ny olona?
Fa iza no mahalala izay mahasoa ny olona amin'izao fiainana izao, dia ny andro vitsy mandalo foana izay laniny toy ny fihelin'ny aloka? Fa iza no hahalaza amin'ny olona izay zavatra ho avy any aoriany aty ambanin'ny masoandro?